Wararka – Page 1580 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweynaha Galmudug oo Gaaray Goobihii ay La Wareegeen Ciidamada Galmudug
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane C/kariin Xuseen Guuled iyo xubno ka tirsan Golaha wasiirada Galmudug ayaa goordhaweyd gaaray deegaanka Jirey oo kamid ah goobihii dhowaan ay ku dagaalameen ciidanka Galmudug iyo Al-shabaab ee bariga gobolka Mudug. Mudane C/kariin Xuseen Guuleed oo xalay ka amba-baxay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa goordhaweyd waxaa lagu soo dhaweeyay deegaanka jirey oo kamid ah deeganadaa ...
Banaanbaxyo ka Socda Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in banaanbaxyo kala duwan in ay ka socdaan Gudaha Magaaladaas. Banaanbaxyada ayaa la sheegayaa in ay yihiin labo mid waxaa lagu soo dhaweynayaa heshiiskii ay wada gaareen qaar kamid ah odayaasha Gobolka Hiiraan iyo Madaxweynaha Soomaliya Xasan shiikh Maxamuud ee ahaa in odoyaasha ay ka qeyb galaan shirka maamul ...
Soomali Loo Heysto Burcad-Badeednimo oo Maxkamad Lagu Soo Taagayo Magaalada Paris
Waxaa maanta Maxkamad ku taala Magaalada Paris ee dalka France kasoo hor muuqan doona 7ruux oo soomali ah oo lala xiriirinaayo falal burcad badeednimo ah. Dhalinyaradaan Soomalida ayaa loo heystaa falalburcad Badeednimo iyo in ay afduubteen sanadkii 2011-kii markab laga lahaa dalka France oo marayay xeebaha dalka Oman ee Bariga dhexe. Qareenka u doodaya Dhalinyaradaan Soomalida ee Maxkamada Lagu soo ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada warka Subax Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Subaxnimo isniin ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 28-3-2016 Warka Subax 28-03-2016
Galmudug oo Sheegtay in lasoo Af-jaray Dagaalkii ka Socday Bariga Gobolka Mudug
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in lasoo af-jaray dagaalkii lagula jiray al-shabaab ee maalmihii dambe ka socday bariga Gobolka Mudug ee bartamaha dhulka Soomaliya. Wasiirka Warfaafinta ee dowlad goboleedka Galmudug Mudane Maxamuud Aadan Cismaan Masagawaay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada Galmudug ay soo af-jareen dagaalkii sedexdii maalin aynu soo dhaafnay ka socday deeganada Bariga Gobolka Galgaduud isla markaana ...
70-qof oo ku Dhimatay Weerar Ismiidaamin ahaa oo Ka Dhacay Magaalada Lahore ee Dalka Pakistan,+Sawiro
Inta la xaqiijiyay 70-ruux ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen 300-kale kadib weerar ismaadaamin oo ka dhacay Magaalada Lahore ee dalka Pakistan, Qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in uu isku qarxiyay goob Beer aheyd oo lagu nasto oo ku taala Magaaladaasi, laguna ciyaarsiiyo carruurta, waxaana halkaas ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray caruurtii ...
Ganacsade Sade Mahad Dirir oo Xalay Lagu Dilay Degmada Heliwaa
Kooxo hubeysan ayaa habeenkii xalay ahaa Masaajid ku yaala Gudaha degmada Degmada Heliwaa waxa ay ku dileen Allaha u naxariistee ganacsade Sade Mahad Dirir oo loo yaqaanay (Cad Cad). Raga hubeysan ayaa la sheegay in dhowr xabadood ay ku dhufteen Sade Mahad Dirir oo loo yaqaanay (Cad Cad). Xili uu akhrisanaayay kitaabka qur’aanka Kariimka sida ay warbaahinta u sheegeen dad ...
Dowlada Soomaliya oo Lacag Gaaraysa Hal-milyan oo Doolar-ka Mareykanka ku Bixinaysa Wax ka Qabashada Abaaraha
Kulan ay maanta isugu yimaadeen Guddiga abaaraha qaranka ayaa loogu hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa wax qabashada abaaraha ka jira qaar kamid ah Gobolada dalka soomaliya. Kulanka waxaa sidoo kale ka qeyb galay Ururada bulshada rayidka, Culumo u diinka iyo Dhalinyarada waxayna dhamaan goobta ka sheegeen in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada wax qabashada abaaraha ka jira ...
Madaxweynaha: “Heshiiska Kismaayo waxaa uu muujinaya baahida loo qabo in la ballaariyo lana dhiirigeliyo hawlaha dib u heshiisiinta’’
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyay heshiiskii dhowaan magaalada Kismaayo ay ku kala saxiixdeen Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo mid ka mid ah beelaha dega gobolladaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ka tarjumayo biseylka shacabka ee fahamka dib u heshiisiinta iyo dib u soo kabashada Soomaaliya. “Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada warka Habeen Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Habeenimo axad ah Tariikhdana ay ku beegan tahay 27-3-2016 Warka Habeen 27-03-2016
Page 1,580 of 1,830« First...1,5501,5601,570«1,5781,5791,5801,5811,582	»	1,5901,6001,610...Last »